Freshchat: Yakabatana, mitauro yakawanda, Yakabatanidzwa Chat Uye Chatbot Yako Saiti | Martech Zone
Kunyangwe iwe uri kutyaira kunotungamira kune yako saiti, vanobata vatengi, kana kupa vatengi rutsigiro… yavo inotarisira mazuva ano kuti webhusaiti yega yega ine yakasangana yekugona kugona. Nepo izvi zvichinzwika zviri nyore, pane zvakawanda zvakaoma nekutaurirana… kubva mukushandisa chat, kushivirira spam, auto-kupindura, kudhiraivha… zvinogona kunyanyisa kutema musoro.
Mazhinji mapuratifomu ehurukuro ari nyore… kungo taura chete pakati peboka rako rekutsigira uye mushanyi kune yako saiti. Izvo zvinosiya mukaha muhombe nemukana mune ruzivo rwevatengi vako pamwe neako bhizinesi 'kugona kuteedzera uye kubatsira vashanyi. Freshchat yakasimba, yepasirose chat mhinduro iyo inopa tani yezvinhu uye kusanganisa.
Freshchat: Meseji Solution yeChikamu chega cheRwendo rweVatengi
Revera inochinjika, yekupedzisira-kusvika-kumagumo, AI inofambiswa bhizinesi chikuva kubatanidza zviitiko zvevatengi, kusimudzira kugadzirwa kwevashandi uye kupa simba kune ecosystem yevanogadzira uye vanobatirana. Chiyero nesimba reiyo Freshworks chikuva.
Lead generation - ita vashanyi vasati vabuda saiti yako vachishandisa bots nemishandirapamwe. Deredza kudzikisira mitengo uye kusimudzira vashanyi nechinangwa chakaderera chekutenga.
Customer support - kutsigira uye kuchengetedza vatengi, kuendesa kugutsikana pachiyero. Trigger otomatiki mhinduro, kutora hurukuro, uye kuyera mhinduro yako yechikwata chekutsigira.
Kubatirana kwevatengi - vhura kukura nekushandura vashanyi kuva vatengi vanoshanda. Zivisa zvinopihwa zvemunhu kana mameseji zvichienderana nezviitiko.
Freshchat Zvimiro Sanganisira
Campaign Nzwisiso - Kuyera. Kuvandudza. Dzokorora. Wana maonero emametrics sekuonekwa, kutumirwa, uye kupindura mwero.
Channels - Pamusoro pewe webhusaiti yako, Freshchat ipuratifomu yakabatana iyo inogona kusangana nemabhizinesi ako maakaunzi paSlack, WhatsApp, Apple Bhizinesi Chat, Line, Facebook Messenger, uye Nhare mbozha.
Chatbots - Iva nekutonga kuzere pamusoro pezvaunobvunza uye maitiro ekubvunza neakagadziridzwa bot workflows. Bvumira bots kuti vaendese mushanyi kuchikwata chako kana vashanyi votaura zvakashata ident izvo zvinoda kubata kwevanhu.
Clearbit Kubatanidzwa - Tsiva mafomu neiyo ClearBit Kubatanidzwa. Gadzira mameseji ako zvichienderana nesaizi yekambani yemushanyi, indasitiri, uye chiitiko pane profaili dzevanhu.
CoBrowsing - Iva pane iro peji sevashandisi vako - Vatungamire vari kure nekuwana yavo skrini uye kutaura navo.
Tsika Targeting - Target vashanyi zvinoenderana nemamiriro ezvinhu akasarudzika kana enda nhanho kumberi uye gadzira yako wega.
Email Notifications - Shingairira kunyangwe mushure mekudonha kwekutungamira kubva pawebsite yako nezviziviso zveemail.
Enterprise - bhizinesi-giredhi mameseji mhinduro yekukwirisa rutsigiro rwako uchiri kuchengeta mutengi kubatikana pachako uye kushaya simba.
Zviitiko Nguva - Tora nhoroondo izere yekushanya kwemushanyi wako pane yako saiti pamwedzi, mazuva, uye nguva dzezuva.
Rubatsiro rweDeski Kunzwisisa - Tora nzwisiso yese yaunoda kuti ununure kugutsikana kwevatengi neicho chaicho-nguva dashibhodhi, dhesiki rerubatsiro, uye nhengo yenhengo inoshuma.
Mune-Mutumwa FAQs - Rega vashanyi vawane mhinduro kubva mukati meWebhu Messenger kuburikidza nekushandisa yekutsvaga kubhawa kutsvaga FAQs. Kutsvaga kune simba kunovimbisa vashandisi havafanirwe kupfuura nemazhinji ezvinyorwa kuti vawane mhinduro.
IntelliAssign - Nzira dzekutaurirana dzinoenderana nehunyanzvi mazinga enhengo dzechikwata chako - anotanga, wepakati, kana nyanzvi. Kana nzira uye nekupa mameseji kune vamiririri zvichibva pamitemo yakatsanangurwa, mafirita, uye mazwi akakosha.
Mitauro yakawanda Mutumwa - Mashoko akakodzera anoita kana kuputsa mutambo. Gadzirisa zvinotaurwa nenhume yako uye sarudza kubva pamitauro makumi matatu nenomwe
OmniChat - Gadzira chizvarwa chekutungamira kwese kwese pamwe nekuwedzera chrome.
Kukoshesa Inbox - Gara pamusoro pehurukuro dzinonyanya kukosha. Sefa mameseji anoenderana nenguva yekupindura.
Mupfumi Media - Pamwe pamwe nemhinduro dzemanyoro, unogona kuisa mavhidhiyo, mifananidzo, emojis, zvitambi, kana maPDF uye zvinyorwa mune ako otomatiki uye emanyowani mhinduro.
SmartPlugs - Dhonza data kubva kune ekunze maapplication senge CRM yako kana yekushambadzira otomatiki chishandiso kana Pusha data kune aya maapplication akawedzera mamiriro pane anotungamira. Kubatanidzwa inosanganisira mafambisirwo ebasa, CRM, kutengesa & mapuratifomu ekushambadzira, vhidhiyo, nhare, E-commerce, kuteedzera nyaya, kushambadzira otomatiki, masisitimu ekubhadhara, accounting, uye masisitimu ekubhadhara
Trigger Sarudzo - Trigger kanopfuura kamwechete kwekusimbisa kana kamwe chete kuti uve asiri-spammy. Iwe unogona zvakare kusarudza kusatangisa kunze kwemaawa ebhizinesi echikwata chako uye / kana timu yako iri pakati pekutaura nemushanyi.
Freshchat Chigadzirwa Kushanya Saina Kuti Uwane Mahara
Kuzivisa: Isu tiri mubatanidzwa we Freshchat.
Tags: apple bhizinesi chatBotcalendlytauriranaichatbotcogniassistcrm kusanganafacebook messengernewchatFreshdesknewmarketerHighrisevaizivamitauro yakawanda kutauranimble crmomnistar yakabatanapagatoPipedrivePipelinedeals crmsdkstoryXpressmutsetseupscopewebhusaiti botwebhusaiti chatwhatsappZoho